Fantatr'izy ireo ny karazana fanafihana vaovao izay misy fiatraikany amin'ny processeur Intel sy AMD | Avy amin'ny Linux
Vondron'olona Ny mpikaroka avy amin'ny University of Virginia sy California dia nanolotra karazana fanafihana vaovao mankany amin'ny rafitry ny microarchitecture an'ny processeur Intel sy AMD.
Ny fomba fanafihana naroso dia mifandraika amin'ny fampiasana cache afovoany an'ny micro-opérations (cache micro-op) amin'ny processeur, izay azo ampiasaina hanangonana vaovao izay nipetraka nandritra ny fanatanterahana ny torolàlana.
Voamarika fa ny fomba vaovao dia manoatra tokoa ny fanafihana Specter v1 raha ny fahombiazan'ny zava-bita dia manasarotra ny mamantatra ny fanafihana ary tsy voasakana amin'ny fomba fiarovana efa misy amin'ny fanafihana amin'ny alàlan'ny fantsona sisin-tany natao hanakanana ireo marefo ateraky ny fanatanterahana vinavinan'ny torolàlana.
Ohatra, ny fampiasana ny fanambarana LFENCE dia manakana ny fivoahana amin'ny dingana manaraka amin'ny famonoana vinavina, saingy tsy miaro amin'ny famoahana amin'ny alàlan'ny rafitra microarchitectural.
Misy fiatraikany amin'ny maodely fikirakirana Intel sy AMD navoaka tamin'ny 2011 ny fomba. ao anatin'izany ny andian-dahatsoratra Intel Skylake sy AMD Zen. Ny CPU maoderina dia manaparitaka ny torolàlana momba ny fikirakirana sarotra ho asa kely tahaka ny RISC, izay cache amin'ny cache hafa.
Ity cache ity dia tsy mitovy amin'ny cache avo lenta, dia tsy azo idirana mivantana ary miasa toy ny buffer stream ahafahana miditra haingana ny valin'ny torolàlana CISC mamaky ao anaty microinstruction RISC.
Na izany aza, ny mpikaroka nahita fomba hamoronana ireo fepetra miseho mandritra ny fifandirana fidirana cache ary mamela ny fitsarana ny atin'ny cache amin'ny micro-opérations amin'ny alàlan'ny famakafakana ny fahasamihafana amin'ny fotoana fanatanterahana hetsika sasany.
Ny cache micro-op amin'ny processeur Intel dia mizarazara mifanakaiky amin'ny kofehy CPU (Hyper-Threading), raha ny processeur AMD Zen mampiasa cache zaraina, izay mamorona fepetra amin'ny famoahana angona angona tsy ao anatin'ny kofehy fanatanterahana iray ihany, fa eo anelanelan'ny kofehy samihafa ao amin'ny SMT (ny famoahana data dia azo atao eo anelanelan'ny kaody mihodina amin'ny cores CPU lojika samihafa).
Ny mpikaroka dia nanolotra fomba fototra mamantatra ny fiovan'ny cache-micro-ops sy ny tranga fanafihana isan-karazany izay mamela hamorona fantsona fampitana data miafina ary hampiasa kaody mora tohina mba hanivana ny angon-drakitra miafina, samy ao anatin'ny dingana iray (ohatra, handaminana ny fizotran'ny tahirin-kevitra rehefa mihazakazaka fahatelo -party code amin'ny motera JIT sy milina virtoaly) ary eo anelanelan'ny kernel sy ny fizotrany eo amin'ny habaky ny mpampiasa.
Amin'ny alàlan'ny famolavolana karazana fanafihana Specter amin'ny alàlan'ny cache micro-op, ny mpikaroka dia nahavita nahatratra 965.59 Kbps niaraka tamin'ny taham-pahadisoana 0.22% sy 785.56 Kbps rehefa nanitsy ny lesoka, raha sendra misy fivoahana ao anaty fitadidiana mitovy adiresy habaka. ary ambaratonga tombontsoa.
Miaraka amina famoahana mivelatra amin'ny ambaratonga samihafa (eo anelanelan'ny kernel sy ny haben'ny mpampiasa), ny 85,2 Kbps dia nisy fanitsiana lesoka nanampy ary 110,96 Kbps nisy tahan'ny lesoka 4%.
Rehefa manafika ny processeur AMD Zen, izay miteraka fivoahana eo anelanelan'ny core CPU lojika samihafa, ny vokatra dia 250 Kbps miaraka amin'ny tahan'ny lesoka 5,59% sy 168,58 Kbps miaraka amin'ny fanitsiana lesoka. Raha ampitahaina amin'ny fomba mahazatra Spectre v1, ny fanafihana vaovao dia nivadika 2,6 heny haingana kokoa.
Ny fanalefahana ny fanafihana cache-micro-op dia antenaina hitaky fanovana manaratsy endrika bebe kokoa noho ny tamin'ny alàlan'ny fiarovana Spectre.
Ho fanekena marimaritra iraisana, soso-kevitra ny hanakana ny fanafihana toy izany tsy amin'ny alàlan'ny fandefasana cache, fa amin'ny haavon'ny fanaraha-maso anomaly sy ny famaritana ireo tranga fanafihana mahazatra.
Toy ny amin'ny fanafihana Spectre, ny fikarakarana ny fivoahan'ny kernel na ny fizotrany hafa dia mitaky fanatanterahana script iray (gadget) amin'ny lafiny fizotran'ny niharam-boina, mitarika amin'ny fanatanterahana ny torolàlana.
Manodidina ny 100 ny fitaovana toy izany hita ao amin'ny kernel Linux ary hesorina, saingy ny vahaolana dia matetika hahitana azy ireo, ohatra ireo izay mifandray amin'ny fandefasana programa BPF namboarina manokana ao anaty kernel.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Fantatr'izy ireo ny karazana fanafihana vaovao izay misy fiatraikany amin'ny processeur Intel sy AMD